Wholesale Trailer Concrete Pump HBTS60.16.110E Manufacturer and Supplier |Simply
Turarera Kongiri Pombi HBTS60.16.110E
Vashandi vedu vanogara vari mumweya we "kuenderera mberi nekuvandudza uye kugona", uye kushandisa yakasarudzika mhando yezvinhu, chiyero chakanaka uye makuru ekutengesa-kutengesa zvigadzirwa nemasevhisi, tinoedza kuwana ingangoita yekutenda kwemutengi wese weIOS Chitupa China Kupisa Kutengesa. Cetificate Trailer Concrete Pump, Isu tichaedza kuchengetedza chimiro chedu chikuru seyakanakisa zvigadzirwa uye mupi wemhinduro tiri munyika.Kune avo vane chero mibvunzo kana mhinduro, ndapota taura nesu pachena.
IOS Chitupa China Kongiri Yekusanganisa Pombi, Kongiri Pombi Rori, Kutenda kwedu ndekwekutanga kutendeka, saka isu tinongopa zvemhando yepamusoro zvekutengesa kune vatengi vedu.Tariro yechokwadi kuti tinogona kuva vashandi vebhizimisi.Isu tinotenda kuti isu tinogona kumisikidza hukama hwebhizinesi kwenguva refu nemumwe.Unogona kutibata wakasununguka kuti uwane rumwe ruzivo uye pricelist yezvinhu zvedu!Iwe ungangove Wakasarudzika nezvinhu zvedu zvebvudzi!
Pombi huru: Rexroth pombi260Muenzaniso:A11VLO260LDR
Max.Theor.Concrete Output: 60 M³/h
Concrete Pumping Pressure: 16Mpa
Hydraulic system: yakavhurwa mhando
Diameter yePombi kubuda 180mm
Hopper urefu: 1400mm
Theor.Max.Delivery Distance(Vertical/Horizontal) : 200/1000 m
Electromotor simba: 110Kw
Hydraulic Circuit fomu Yakavhurwa-dunhu
Hydraulic oiri tank kugona: 580 L
Pakazara dimension(LxWXH): 6300X2100X2250mm
Huremu hwese: 6000Kg
Zvakapfuura: Turarera Kongiri Pombi HBTS60.13.90E
Zvinotevera: Turarera Kongiri Pombi HBTS40.06.55E
1.Is SITC inogadzira kana kutengesa kambani?
SITS ikambani yeboka, inosanganisira fekitori shanu dzepakati nepakati, imwe yepamusoro tekinoroji yekuvandudza kambani uye inyanzvi yekutengeserana kwenyika kambani.Supply from dhizaini - kugadzirwa - kushambadzira - tengesa -mushure mekutengesa basa vese mutsara sevhisi timu.
2.Ndezvipi zvakakosha zvigadzirwa zveSITC?
SITC inonyanya kutsigira michina yekuvaka, senge loader, skid loader, excavator, mixer, pombi yekongiri, roller yemugwagwa, crane nezvimwe.
3.Yakareba sei nguva yewaranti?
Kazhinji, SITC zvigadzirwa zvine gore rimwe garandi nguva.
4.Chii chinonzi MOQ?
5.Ndeipi mutemo wevamiririri?
Kune vamiririri, SITC inopa mutengo wemutengesi wenzvimbo yavo, uye kubatsira kuita kushambadza munzvimbo yavo, zvimwe zviratidziro munzvimbo yeagent zvinopihwa zvakare.Gore rega rega, SITC sevhisi mainjiniya anoenda kukambani yevamiririri kuti avabatsire kutsika-tsika mibvunzo yehunyanzvi.
SITC Fekitari inopa yakaderera mutengo portable ...
SITC 80.1813.110ES Concrete Mixer Ine Mapombi e...
SITC 30.1006.45ES 45kw Electric Trailer Yakaiswa...
Turarera Kongiri Pombi HBTS60.13.90E
SITC 50.1410.75ES Concrete Mixer Ine Mapombi e...